Kuchenesa Aluminium Foil | induction kupisa muchina mugadziri | induction kudziya mhinduro
Heating Aluminium Foil
Kuchena Aluminium Foil For Cap Sealing
Induction Kuchenesa Aluminium Foil YeCap Kuisa chisimbiso neIGBT inductive heater
Chinangwa Iyo induction heater inoshandiswa kupisa polymer laminated aluminium foil mu 0.5 kusvika 2.0 masekondi. Iko kupisa kwakaburitswa mualuminium pepi kunonyungudutsa iyo polymer iyo inosunga kumutsipa weplastiki mudziyo.
Chinyorwa Aluminium foil, polyethylene, polypropylene, polyvinylchloride, polystyrene, polyethylene terephthalate, styrene acrylonitrile
Kupisa 300 - 400 (ºF), 149 - 204 (ºC)
Frequency 50 ku200 kHz
Zvishandiso DAWEI solid-state induction simba rinoshanda riri pakati pe1 & 10 kW pamafizikisi e50- 200 kHz. Aya mayuniti anoshanda neakareba ekuisa misoro misoro iyo inobvumidza iyo huru simba kabati yemidziyo kuti iwanikwe iri kure kubva ipapo ipapo nzvimbo yekugadzira. Kureba kusvika pamamita zana kunogoneka. Iyo microprocessor inoshandiswa kudzora
uye chengetedza iyo system uye inovimbisa kuti iyo yakakwana yekushanda frequency inochengetwa nguva dzese uye kuti yega yega mudziyo
inogamuchira huwandu hunopisa hwekupisa kubva kumhepo kusvika pakufamba.
Maitiro maviri emhando dzakasiyana dzealuminium foil laminates anowanikwa pachishandiswa ichi. Gungano rekutanga rinosanganisira kutsigira
bhodhi / reseal, wakisi yakatetepa, aruminiyamu foil, uye yekupisa firimu yeanotsigirwa masisitimu (Mufananidzo 1). Gungano rechipiri rinosanganisira iyo yakanyanya tembiricha firimu, aluminium foil, uye iyo yekupisa firimu yeasina kutsigirwa masystem (Mufananidzo 2). Maitiro acho kukodzera iyo foil membrane mukati kapu uye kukodzera kapu kune mudziyo mushure chigadzirwa chazadzwa.
Mhedzisiro Yeiyo yealuminium foil gungano sezvakaratidzwa muMufananidzo 1, kupisa kunopinzwa mune yesimbi foil neiyo induction coil ndoda
ipapo inonyungudutsa iyo polymer kupfeka uye mutsipa weiyo mudziyo unogadzira hermetic chisimbiso pakati peye kupisa chisimbiso firimu
uye mupendero wehari yacho. Iko kupisa kunonyungudutsa wakisi pakati pealuminium pepa uye neshure bhodhi. Wakisi iri
yakanyura mubhodhi rekuseri. Izvi zvinoguma nehukama hwakasimba hwemhepo pakati penzvimbo yealuminium / membrane uye mupendero weiyo
chigadziko, bhodhi rekusunungurwa rinosunungurwa uye rinoramba riri mumusoro.
Maitiro (akaenderera) Panyaya yeganhu risingatsigirwi muMufananidzo 2, rumwe rutivi rwealuminium pepuru rwakaputirwa nefirimu rinodzivira repolymer yefirimu uye kumeso uku kuchasangana nekuvharirwa mumudziyo. Rumwe rutivi rweiyo foil iyo inosangana nekopu ine firimu yakanyunguduka yepamusoro inodzivirira kunamatira kwealuminium kune chivharo ichibvumira mushandisi wekupedzisira kusunungura chivharo. Mhando dzisina kutsigirwa dzinowanzo shandiswa uko mushandisi wekupedzisira anobaya iyo tamper inooneka membrane isati yaendesa chigadzirwa. Iyo aruminiyamu foil inoshanda seyakavhara mhepo inodzivirira kutsva kwechigadzirwa uye ichiitadzisa kubva pakuoma.
Categories Technologies Tags Heating Aluminium Foil, high frequency cap sealing, induction cap sealing, RF Kutengesa aluminium foil